IKEA ပစ်လွှတ် HomeKit မှာသဟဇာတဖြစ်လိမ့်မည်မဟုတ်ပေ smart ဘက်မှာပြတင်းပေါက်ရှပ် - Tele RELAY တစ်ခု
မူလစာမျက်နှာ » TECH & Telecom "စမတ်ဘက်မှာပြတင်းပေါက်ရှပ် IKEA ပစ်လွှတ်မှာသဟဇာတဖြစ်လိမ့်မည်မဟုတ်ပေ HomeKit
IKEA အိမ်ပြန်အလိုအလျောက်နှင့် ပတ်သက်. overdrive ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါသည်။ ဆှီဒငျကုမ္ပဏီကြီးတစ်ဦးဆက်ကပ်အပ်နှံဝန်ဆောင်မှုဖန်တီးထားသည်။ ဒါကြောင့်နေဆဲင်း၏ထုတ်ကုန်များပစ်လွှတ်စေရန်အချို့သောချိန်ညှိရှိပါတယ်, ကဆိုသည်။ ဘက်မှာပြတင်းပေါက်ရှပ်နှင့်အတူသက်သေပြ။
သော့ချက် poins အိမ်ပြန်အလိုအလျောက်ထုတ်ကုန်တစ်ခုမှာ IKEAအပြင်ကသူတို့ကအရမ်းတတ်နိုင်စျေးနှုန်းများအနေဖြင့် Apple ကဂေဟစနစ် HomeKit နှင့်အတူ၎င်းတို့၏လိုက်ဖက်တဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကသူတို့ကအခြား devices များနှင့်အတူသုံးနိုငျနှင့်အတူတူပင် applications များမှတဆင့်အုပ်စုဖွဲ့နှင့်တစ်ပြိုင်နက်ထိန်းချုပ် HomeKit ဆိုလိုသည်။ ကံမကောင်းစွာအနာဂတ်စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်ထုတ်ကုန်များအတွက်, စမတ်ဘက်မှာပြတင်းပေါက်ရှပ် IKEA FYRTUR, သူတို့ကမသွားဘူး အဆိုပါပစ်လွှတ် HomeKit နှင့်သဟဇာတမရ.
ပုဂ္ဂလိက IKEA HomeKit ပစ်လွှတ်ချိတ်ဆက်ရှပ်တာ
သင်ပထမဦးဆုံးအကြိမ်အဘို့အကအကြောင်းစကားကိုနားထောငျလြှငျ, IKEA အဆိုပါချိတ်ဆက်ဘက်မှာပြတင်းပေါက်ရှပ်ဖွင့်ဖို့က၎င်း၏ရည်ရွယ်ချက်ကိုလွန်ခဲ့တဲ့အချိန်အနည်းငယ်ထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့သည်ကိုငါသိ၏။ စျေးကွက်အပေါ် HomeKit နှင့်သဟဇာတဒီလိုမျိုးများစွာသောထုတ်ကုန်ရှိနေကြသည်မဟုတ်ကတည်းကဒါဟာအဖြစ်ကောင်းစွာသူတို့ရဲ့နေအိမ်တပ်ဆင်ချင်သောသူတို့အဘို့အလွန်ကောင်းသတင်းဖြစ်ခဲ့သည်။ အောင်မြင်မှုကအခြားအမှတ်တံဆိပ်များအတွက်လမ်းခင်းရမည်အကြောင်း, သင်တို့အဘို့စောင့်ဆိုင်းနေလျှင်အဘယ်သူ, သိတယ်။ ရွေးချယ်မှုများထားရှိခြင်းသည်ဤအဆင်း, ထိုကဲ့သို့သောကွဲပြားနှုန်းထားများခွင့်ပြု, အစဉ်မပြတ်ဖောက်သည်များအတွက်ကောင်းတစ်ဦး option တစ်ခုဖြစ်သည်။ အဘယ်အရာကိုအတော်လေးဈေးပေါပေါတပ်ဆင်။
ဒါကဖြစ်လျက်ရှိ IKEA HomeKit Compatibility ကိုပစ်လွှတ်မှာသင်တို့အဘို့စောင့်ဆိုင်းနေမည်မဟုတ်ကြောင်းအတည်ပြုပြောကြားခဲ့သည်ဟုဆိုသည်။ ဆှီဒငျကုမ္ပဏီကြီးသို့သော်ကြောင့်တစ်ချိန်ချိန်တွင်ယင်းကျဆုံးခြင်းအတွက်နောက်ပိုင်းမှာဆက်ပြောသည်လိမ့်မည်ဟုဆိုသည်။ အတိအကျရက်စွဲကံမကောင်းထုတ်ဖော်နိုင်ခြင်းမရှိသေးပေ။ ဤသည် IKEA Compatibility ကို HomeKit တွန်းပထမဦးဆုံးအကြိမ်မဟုတ်ပါဘူး။ ယခင်ကအဆိုပါအမှတ်တံဆိပ်က၎င်း၏ချိတ်ဆက်ခြေစွပ်ဘို့ Apple ရဲ့နေအိမ်အလိုအလျောက် protocol ၏စီမံခန့်ခွဲမှုရွှေ့ဆိုင်းခဲ့သည်။ သူမသည်နောက်ဆုံးတော့ရောက်ရှိလာခဲ့လေသည်။ ဘယ်တော့မှထက် သာ. ကောင်း၏နှောင်းပိုင်းက။ နှင့်နေအိမ်အလိုအလျောက်ထံအပ်နှံနေတဲ့ service ကို, ဆုတ်ယုတ်မှု၏ဤကြင်နာနောက်ဆုံးမှာလျင်မြန်စွာပျောက်ကွယ်သွားသင့်ကြောင်းအဘယ်သူမျှမသံသယထူထောင်မှုနှင့်အတူ။
IKEA အိမ်ပြန်အလိုအလျောက်ထံအပ်နှံတစ်ယူနစ် created
Apple က HomePod သြဂုတ်လ 23 အပေါ်ဂျပန်ရောက်ရှိ
Google ကသိုက်ကင်မရာများ status ကိုညွှန်ပြချက်ကိုပိတ်ထားရမရနိုငျ
တွစ်တာထဲမှာအကြိုက်ဆုံး tweet လုပ်နည်း - Tech မှ - Numerama